देउवालाई समर्थन गरे बापत सिंहले तत्काल उपप्रधानमन्त्री पाउने बजारमा हल्ल़ा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
देउवालाई समर्थन गरे बापत सिंहले तत्काल उपप्रधानमन्त्री पाउने बजारमा हल्ल़ा !
कांग्रेस सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे बापत प्रकाशमान सिंहले तत्काल उपप्रधानमन्त्री पाउने भएका छन्।
दिउँसो ३ः३० बजेबाट सुरु हुने मतदानमा सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णयसँगै सिंहलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ।
दोस्रो चरणको चुनावमा प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेपछि उनको जित सुनिश्चित जस्तै भएको छ। सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि देउवालाई ८२ मतको कमी भएपछि पुनः मतदान हुने भएको छ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिका अनुसार देउवाले २२५८ मत प्राप्त गरेका हुन्। खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। सोमबार भएको निर्वाचनमा ४६७९ मत खसेको थियो। सभापतिमा निर्वाचित हुन २३४० मत आवश्यक थियो।
आखिर काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतपत्र खसाएको पानी ट्याङ्कीमा २३ मत चाहिँ बढी कसरी पर्न गयो त ? यो प्रश्न गर्दा आचार्यले भने, ‘त्यो बढी देखिएको निर्वाचन समितिले सच्याइसक्यो, शेखर कोइरालाको २७ मत घट्यो । विमलेन्द्रजीको एक मत बढ्यो, कल्याण गुरुङको दुई मत बढ्यो । एक मतचाहिँ बदरमा यताउति भयो होला ।